कश्मीरमा गोर्खा सैनिकको मृत्यु : न बाबुको इच्छा पूरा भयो, न छोराको वाचा – Namaste Dainik
कश्मीरमा गोर्खा सैनिकको मृत्यु : न बाबुको इच्छा पूरा भयो, न छोराको वाचा
June 23, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कश्मीरमा गोर्खा सैनिकको मृत्यु : न बाबुको इच्छा पूरा भयो, न छोराको वाचा
बुटवल — भारतीय सीमा सुरक्षामा खटिएका गुल्मीका ३८ वर्षीय युवकले आफ्ना ९० वर्षीय बुवासँग गरेको वाचा अधुरै रहेको छ । यस पटक बिदामा आउँदा बाबुलाई पहाड लैजाने वाचा गरेका दीपक कार्कीको कश्मीरमा भारतीय सीमा रक्षामा खटिएकै बेला सोमबार बिहान पाकिस्तानी सेनाबाट भएको गोलीबारीमा मृत्यु भएको छ ।
दुई वर्षअघि आमा गुमाएका गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका–५ खर्ज्याङका दीपकका ९० वर्षीय वृद्ध बुवा शालिकरामले उनैलाई कुरिरहेका थिए ।
तराईको गर्मी खप्न नसकेपछि बाबुले फागुनमै फोन गरेर आफू पहाड (गुल्मी) जान खोजेको बताएका थिए । दीपकले चैतको अन्तिम साता दुई महिनाको छुट्टीमा आउने जानकारी दिएका थिए । तर,कोरोना महामारीले लकडाउन भएपछि उनी उतै थुनिए । त्यसले न बाबुको पुर्खौली थलो पुग्ने सपना पूरा भयो,न दीपकको बाबु भेट्ने वाचा । गुल्मीबाट दुई वर्षअघि मात्र रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–५ मणिग्राममा बसाइँ सरेका कार्की परिवारमा बुवा,श्रीमती,दुई छोरी र एक छोरा छन् ।
दीपकका दाजु कृष्ण कार्कीका अनुसार उनी दशैंमा एक महिनाको छुट्टीमा आएर फर्केका थिए । भारतीय सेनामा उनको १८ वर्ष पूरा भएको थियो। एक वर्षअघि नै पेन्सन आउने तयारी गरेका उनी सिपाहीबाट हवल्दार पदमा बढुवा भएपछि रोकिएका थिए ।‘एक वर्षअघि नै पेन्सनमा निस्कन खोजेको थियो,’ दाजु कृष्णले भने,‘बढुवा भएपछि रोकिएको हो,यस्तो हुन लेखेको रहेछ ।’उनी पनि भारतको मुम्बईमा काम गर्छन् । भारतबाट आएर गुल्मीकै छत्रकोटमा २४ दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा छन् । भाइको मृत्युको खबर पाए पनि उनको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नआएका कारण घर पुग्न पाएका छैनन् ।
कार्की भारतीय सेनाको ३/५ गोरखा राइफल्समा कार्यरत थिए । जम्मू–कश्मीरको नौसेरा क्षेत्रको रजौरी जिल्लामा खटिएका उनलाई सोमबार बिहान गोली लागेको थियो । गम्भीर घाइते उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको भन्दै भारतीय सेनाका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट कर्णेल देवेन्द्र आनन्दले परिवारलाई मृत्युको जानकारी गराएका थिए । उनको शव मंगलबार गोरखपुरमा ल्याइएको छ । शवलाई भारतीय सेनाको टुकडीले सलामी अर्पण गरेपछि गोरखपुरमै अन्त्येष्टि गर्ने जानकारी गराएपछि श्रीमती,५ वर्षीय छोरा, ११ र ९ वर्षका दुई छोरीसहित आफन्त गोरखपुर पुगेका छन् ।
गुल्मीको खर्ज्याङका उनका छिमेकी हरिनारायण शर्माले दीपक युवा अवस्थादेखि नै निकै लगनशील र मेहनती युवा भएको बताए । ‘सारै मिलनसार र मेहनती थियो,’ उनले भने,‘तर, अल्पायुको रहेछ, उसको मृत्युको खबरले गाउँ नै शोकमा छ ।’उनको मृत्युको खबरसँगै उनका साथी र चिनेजानेकाले मात्रै नभई अन्यले पनि सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रकट गरेका छन् ।
लाफिङ्ग बुद्धलाई यो देशमा मान्छन् भगवान्, यस्तो छ हाँस्नुको रहस्य !
आजको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल आषाढ ०९ गते -.२०७७ साल आषाढ ०९ गते । मंगलबार
ओलीले देखाएको उग्रराष्ट्रवादले नेपाल र इण्डीयाको सम्बन्धलाई बवार्द पार्यो – डा. दीक्षित ( भिडियो)
प्रदेस सरकार ले क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई दैनिक ५ सय १० रुपैंयाँ दिने ।
April 14, 2020 April 14, 2020 Namastedainik
नेपाल टेलिकमले कोरोना सङ्क्रमित पत्ता लगाउन सुरु गर्यो अनौठो प्रणाली ।